Lo muzi enhle eluhlaza kakhulu is eseduze ogwini le Kerch Strait iphakathi kolwandle Olumnyama futhi Azov ezilwandle, enhlonhlweni yaseCrimea. Inhlokodolobha yangaphambili umbuso Bosporus, idolobha lesimanje lase-Kerch zithandwa kakhulu. Kuyinto idolobha elikhulu kunawo wonke yezimboni enhlonhlweni, futhi okubaluleke kakhulu, indawo yokungcebeleka Crimean owaziwa esizoheha izigidi zezivakashi.
Kerch - omunye lamadolobha amadala yale nhlonhlo, futhi ngoba lapha ungakwazi kalula sihlanganise iholidi beach nge uhambo futhi ulwazi. Ngo futhi izungeze lo muzi eziningi izikhumbuzo zemvelo, zamasiko nezomlando. Phakathi kwabo - entabeni Mithridates futhi Big Mitridatskaya izitebhisi, kumbiwa emzini wasendulo Panticapaeum futhi lesikhumbuzo zanamuhla zomlando - i Obelisk Inkazimulo.
Bobabili abadala izingane zesikole kuyoba ezithakazelisayo ukuvakashela Barrow Imperial ethuneni umbusi Bosporus isimo, kanye emadolobheni amabili lasendulo, lapho zitholakala empumalanga Panticapaeum, WaseTurkey inqaba Yeni-Kale Fortress Kerch, elakhiwa ngekhulu XIX.
Ungavakashela Adzhimushkayskie inkwali ukuthi zonke izimenywa wenze okuvelayo enkulu. Abathandi izakhiwo zenkolo futhi akazange ukudanisa emzini Kerch. Nansi ethempelini endala enhlonhlweni St Ioanna Predtechi, isikhumbuzo neyaziwayo bokwakha WaseByzantium.
Nokho, wonke umuntu weza iholide izingane kanye nje ufuna ukuphumula, qiniseka ukuya ipulazi intshe 'Ehlukile "noma vakashela i-Museum eyingqayizivele Marine Fauna and Flora.
Futhi nakuba umuzi eziningi ezikhangayo ngempela, izivakashi ngokuvamile benesithakazelo Kerch amabhishi (izibuyekezo siliqinisekise). Umuzi nasezindaweni ezakhelene nalo kukhona kokubili izindawo kahle kwanikeza ugu ngengqalasizinda evuthiwe, futhi cishe zasendle, lapho uthanda ukuba baphumule abantu, ukhathele umsindo befuna kwedolobha elikhulu.
Kerch: idolobha ebhishi
Ngo-2011, usebe lolwandle idolobha lalungiswa, igama wanikwa Sun uDali. Kufanele kuqashelwe ukuthi phakathi amabili amabhishi engcono yale nhlonhlo. Kodwa eCrimea, selibalelwa kuka-500.
Sun uDali isendaweni omuzi, ngakho lapha kungcono ukuya ngeteksi. Ngokusho izakhamizi, kuba ifakwe kakhulu futhi ezikhangayo lolwandle edolobheni. Lapha kunikezwa ukuze izivakashi nge namanzi izihlambi, ukushintsha apholile, izindlu zangasese. On the indawo kukhona cafe-bar.
Iningi izivakashi eza Kerch idolobha lolwandle ukuvakashelwa kuyadingeka. He is ebanzi kakhulu, sandy, nge phansi flat. It unikeza ezihlukahlukene amanzi ezemidlalo, ukuqashwa kungathatha konke okudingayo ukuze amanzi ezemidlalo. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, setha amaslayidi inflatable nezinye ezikhangayo ezokwenza nentshisekelo izingane nje kuphela kodwa futhi abadala.
Lokhu lolwandle yaqanjwa igama lomgwaqo, okuyinto olwandle uphela ngqo. It uyagijima okuhamba kuqondane nogu futhi Izitolo ambalwa kolwandle. Mangisho ukuthi amaholide eza Kerch, amabhishi wakhethwa njengosuku coast kweBlack Sea ogwini loLwandle Azov.
"Moscow" ubhekwa kakhulu ebizayo kuleli dolobha. It kungokwalabo oLwandle Azov. Ugu kuyinto sandy, kodwa enzima kakhulu ogwini, ne ezinkulu eziningi kanye okwakheke rock. Ngo-July no-August-ke igcwele utshani. Kodwa kungcono amaholide ukuthole kunalokho plus ngaphandle lokususa: etshanini, ungakwazi kahle ukuhlala ithawula. Futhi kulabo abasebenza induduzo ngaphezulu ukuze iqashwe ungakwazi uthathe i-umbrella futhi Chaise lounge on-site ugingqe iphuzu.
Kukhona izindawo zokushintshela, izihlambi, izindlu zangasese. Naphezu ingqalasizinda evuthiwe, emaphethelweni ebhishi ungathola izindawo ngokuphelele zasendle lapho kukhona beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni kancane kakhulu. Ngakho, iqiniso, kude kakhulu ukuba izihlambi, kodwa ephephile lapha, akukho umsindo befuna. Beach lincane, kuyilapho ezingeni lesibili (kancane ngaphezu nomdweshu wezwe elisogwini) lapho benzelwe izindawo amabhentshi namathebula. Lapha, emini nawe ungadla ngisho barbequing.
Lapha ukuzijabulisa kancane, ngaphandle ebhishi akuyona kakhulu efanelekayo sokuzilibazisa nezingane ezincane kakhulu. Ngena emanzini angajulile kuphela kwezinye izindawo, kodwa ikakhulu ukuthi pretty cool. Nokho, ithola abalandeli bayo phakathi izivakashi Kerch. Ogwini lapha abafani neze, ngakho wonke umuntu angakhetha ukunambitheka kwabo siqu.
"Moscow" ngokuvamile kuyancanyelwa yilabo ungathandi lokuhlala enkulu izivakashi futhi sazise ubuhle bemvelo isetshenzwe.
Beach "Youth" (Kerch)
Le ndawo ubhekwa olunothile aluhlaza futhi kunazo zonke kuleli dolobha. Itholakala eduze ethandwa idolobha epaki. Voykova, lapho uthanda ukuba baphumule hhayi kuphela ukuvakashela idolobha kodwa futhi abantu bakule ndawo. Kwesokudla aphume kwepaki ungaya ebhishi. igama layo kwathiwa anginikhethanga ngengozi - lapho uthanda ngempela ukuze siphumuze ingqondo, intsha, kuyilapho izivakashi amadala nje lapha.
Ngaphezu kwalokho, kuyinto bazizwa ngempela ukhululekile futhi imindeni enezingane. Uzalo Mnene emanzini, ukujula incane, ngenxa lapho amanzi lifudumeza ngokuphelele, ukuheha abazali ezivakashini abasha. Beach incane, ubude - amamitha nje kuka amabili, nobubanzi - engaba mihlanu. Kodwa lokhu kwanele ukuze uthole lounger ilanga, kuyilapho ezingeni lesibili, lapho kukhona amatafula, gazebos kanye ukosa inyama, ukuba ungathatha ikhefu kusukela elangeni elishisayo nokudla okuncane.
Ukuze kwesokunxele ebhishi kukhona Gazebo esikhulu, alinikela ukubukwa emangalisa amawa nolwandle. Ngu "ubusha" engafinyelelwa ngemoto. Kukhona kuqashelwe yokupaka
Lokhu lolwandle ithole igama yokudumisa endaweni emaphethelweni empumalanga yedolobha lapho likhona phezu ogwini loLwandle efudumele Azov. Ogwini kuphezulu futhi ngempela emaweni, hhayi ejwayelekile kakhulu emzini like Kerch. Beaches ngokwemvelo kwezinye izindawo, encane kodwa ethokomele kakhulu, embozwe isihlabathi kanye igobolondo. Iningi lazo mincane futhi emifushane (kusuka eziyishumi ukuze eziyikhulu amamitha).
Ngezansi flat futhi abushelelezi. Naphezu kweqiniso lokuthi zokuhlala endaweni Izicupho ezinabantu Ngazakhela izindlu zangasese, kukhona cishe ayikho ingqalasizinda, lezi amabhishi kunalokho ubizwe zasendle. Abantu bakule ndawo lapha uphumule, ngoba Uzalo emanzini iwummango futhi oyingozi.
izivakashi eziningi zithi iminyaka eminingi beza nje Kerch. amabhishi Local basuke wanelisa ngokuyinhloko ukukhetha izindawo elula kunazo. Ngokwesibonelo, olwandle zonke izimo ngemindeni nezingane, kuyilapho "gibe" esezisejwayele abalandeli emidlalweni eyingozi.
Izikhulumi zeSoviet acoustic: amamodeli, izici
Afrika: izixhumanisi amaphuzu kakhulu. Geography of Africa